★Dlala Inn★ Sunday Market 玩宿~加雅街 - I-Airbnb
★Dlala Inn★ Sunday Market 玩宿~加雅街
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Play Inn
U-Play Inn Ungumbungazi ovelele
Ukubuka okuhlaba umxhwele, imisebenzi yangaphandle ejabulisayo kanye nezilwane zasendle eziwubukhazikhazi zonke ziyizimpawu zokuthengisa zedolobha elinempilo lase-Kota Kinabalu, kodwa izinto sezizonyakaziswa nesakhamuzi salo esisha edolobheni - i-Play Inn. Ingxenye yedolobha elihlanganisiwe eliwumugqa we-Aeropod @ Tanjung Aru, sikugcina useduze nezitolo eziningi, izindawo zokudlela namahhovisi, kuyilapho sijabulela ukutholakala endaweni eyi-5km nje ukusuka enkabeni yedolobha kanye ne-3km ukusuka e-Kota Kinabalu. Isikhumulo sezindiza samazwe ngamazwe (KKIA).
Lesi sikhala sesimanje asikona nje ukuphithizela nokuphithizela, kunjalo. Uzovuka ubone uhlaza oluluhlaza lwehlathi olumane nje weqe futhi ugxume, kanye nendawo ezungezile enesithombe esihle ongayihambahamba kalula nganoma isiphi isikhathi sosuku. Ngenkathi unquma ukuthi yiziphi izigigaba ozozenza, shaya isikhungo sethu sokuzilolonga esihlonyiswe kahle ngaphambi kwakho konke ukudla okuhehayo oyokushwabadela. Woza ekhaya emakamelweni ethu esitayela sestudiyo ekupheleni kosuku olude futhi ungene emibhedeni ethokomele kakhulu njengoba uthola ama-imeyili omsebenzi noma umhlaba wenkundla yezokuxhumana.
I-Aeropod iyidolobha elikhulu elihlanganisiwe elihlanganisiwe e-Kota Kinabalu elithatha indawo engamahektha angu-60. Ukusondela kwe-3km esikhumulweni sezindiza i-Kota Kinabalu International kanye nehabhu likaloliwe kuyenza ibe indawo ekahle yezivakashi, imindeni noma amakhasimende ezinkampani ngokufanayo. Phila, funda, sebenza futhi udlale kule ndawo eyingqayizivele ematasatasa eqhelelene nokuphithizela kwedolobha laseKota Kinabalu.
Ibungazwe ngu-Play Inn
Asihlali kuleyo ndawo kodwa singatholakala ngebhokisi lokungenayo le-Airbnb nezinye izinhlelo zokusebenza zezingxoxo ezihlukahlukene.
UPlay Inn Ungumbungazi ovelele